आफुमाथि लगाइएको आरोप सावित भए धरहराबाट हाम फाल्छु – Kadar News : Oneline Digital News:
आफुमाथि लगाइएको आरोप सावित भए धरहराबाट हाम फाल्छु
– महेश बस्नेत
प्रकासित : १६ बैशाख २०७७, मंगलवार १९:४८
१६ बैशाख, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी का सांसदलाई अपरण गरेको कसुरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि ज्यान समेत दिन तयार रहेको बताएका छन् । राजनीति वृतमा कुनै न कुनै कोणबाट चर्चा भइरहने बस्नेतको आजभोलि भने सांसद अहरण असुर लगाइएको छ ।
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले बस्नेतलाई सांसद अपहरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । बस्नेत तथा नेकपाका अर्को सांंसद किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमाथि नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र यादवसहितका केही सांसदलाई पार्टी फुटाउनको लागी होटलमा थुनेर राखेको आरोप लागेको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र त्यो घटनाले नेकपामा अहिले ठूलै हलचल ल्याएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोडुनुपर्ने स्वर समेत उठिरहेका छन् । खास सासद महेश बस्नेतले के सांसदहरुलाई अपहरण गरिएकै हुन त ? अब प्रधानमन्त्री ओली नेकपाभित्र कमजोर भएकै हो त ? भन्ने जनता टेलिभिजनको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा सांसद बस्नेतले आफू र प्रधानमन्त्री माथी लगाएको आरोप पुष्टि भए धरहराबाट हाम फाल्ने समेत बताएका छन् । तर त्यस्ता कुनै खालका हर्कत नभएको समेत बताएका छन् ।